शाहरुखका छोरा आर्यनको घटनामा किन तानिइन् अनन्या पाण्डे ? – Jagaran Nepal
शाहरुखका छोरा आर्यनको घटनामा किन तानिइन् अनन्या पाण्डे ?
काठमाडौ । शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान ड्रग घटनामा पक्राउ परेर अहिले पनि हिरासतमा छन् । अब फेरी सोही घटनामा चंकी पाण्डेकी छोरी अनन्या पाण्डे पनि तानिएकी छन् । उनलाई सवा दुई घण्टाको सोधपुछपछि शुक्रवार फेरि एनसीबीले बोलाएको छ । बिहीवार अनन्याको घरमा छापा परेको थियो । जाँच एजेन्सीको छापा परेपछि अनन्याको फोन पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
वास्तवमा एनसीबीले आर्यन खान र एक बलिउड नायिकाको च्याट फेला पारेको जनाएको थियो । जहाँ ड्रग बारे कुराकानी भएको बताएको थियो । एनसीबीले त्यतीबेला ति नायीका को हुन् भन्ने खुलाएको थिएन । ती नायिका अनन्या नै हुन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यही च्याटलाई आधार बनाएर एनसीबीले अदालतमा आर्यनसहित बाँकी आरोपीका लागि रिमाण्ड मागेको छ ।
अनन्या २२ वर्षकी हुन् र उनी आफ्नो बुबासँग उनले किनेको घरमा बस्छिन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार अनन्याको कमाइ ७२ करोड भारू हो । एउटा चलचित्रमा काम गर्न उनले दुई करोड लिन्छिन् ।
उनको कमाइ धेरैजसो विज्ञापनको माध्यमबाट हुने गर्छ । साथै इन्स्टाग्राममा २०।३ मिलियन फलोअर्स छन्, जसबाट उनले ब्राण्ड प्रमोशनको पनि काम पाउने गरेकी छन् । अनन्या र शाहरुख खानकी छोरी सुहाना एकदमै मिल्ने साथी हुन् । अनन्याको आर्यनसँग पनि राम्रै मित्रता छ । यी तीनजनै सँगै पार्टी गरेका देखिन्छन् ।
एनसीबीले अनन्या पनि आर्यनको साथमा ड्रग लिने गरेको आशंका गरेको छ । किनकि सो च्याटले त्यसैतर्फ इशारा गरिरहेको छ । अनन्याले अहिलेसम्म तीन वटा चलचित्रमा काम गरेकी छन् । उनले ‘स्टुडेन्ट अफ द इअर २, पति पत्नी ओर वो र खाली पिली’ मा काम गरेकी थिइन् ।